Cloudwords: Global Kushambadzira Kugadzira Kudiwa uye Dhiraivha Kukura | Martech Zone
Kuti makambani aite gadzira kudiwa uye kukura pasirese, ivo vanofanirwa kutaura mitauro gumi nembiri kuti vataure ne12% yevateereri vavo. Sezvo inopfuura 80% yemari yemakambani eUS iri kuuya kubva kune vatengi vepasirese, iyo $ 50 + mabhiriyoni zvemukati #localization uye #translation indasitiri inoenderana nekutyaira vatengi kuita mumisika yepasirese. Nekudaro, makambani anoda kukurumidza kushandura zvinhu zvavo zvekushambadzira uye nekuwedzera pasirese vakatarisana nedambudziko hombe: maitiro avo aripo enzvimbo ibhuku, kushandisa nguva, kusashanda, uye kuomarara.
Iyo Global Yemukati Gap
Vatengesi vanogadzira mavhoriyamu akakura ekushambadzira uye ekutengesa zvemukati mune yekushambadzira otomatiki, zvemukati kushambadzira uye Webhu CMS masystem avanoshandisa kuendesa zvakasarudzika zviitiko uye nhimbe kunongedza vateereri. Kuti usvike kune vanotaura mitauro yakawanda pasi rose, izvo zvese zvirimo inoda kuve inowanikwa munzvimbo yemisika misika. Nekudaro, vanopa sevhisi yekushandura havashandise iwo masisitimu, izvo zvinoguma nehurongwa husina kukwana hwekuita nzvimbo. Kuti vasangane nenguva yekuenda kumusika, vashambadziri vanofanirwa kuita shanduko-yekutengesa: Nekuda kwenguva uye zvinodzora bhajeti, ivo vanongokwanisa kududzira zvimwe zvinhu zvemimwe misika, vachisiya mikana yemari patafura.
Cloudwords inogadzirisa iyo wepasi rose zvemukati mukaha.
Cloudwords kushambadzira kwepasirese. Sezvo Global Go-to-Market Hub, Cloudwords inogadzirisa mashandiro emuno ekushambadzira ezvose zvirimo mubhizinesi kubatsira makambani kuvhura mitauro yakawanda-mitauro yepasirose 3-4 nguva nekukurumidza uye ingangoita 30% yemutengo. Richard Harpham, CEO weCloudwords
Iyo yechokwadi tekinoroji kambani yakavakirwa kubva pasi kumusoro, Cloudwords ndiyo yekutanga gore-yakavakirwa, shanduro otomatiki chikuva chakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvemutengi. Cloudwords inonunura isina musono kusangana kweinopfuura makumi maviri indasitiri-inotungamira kushambadzira otomatiki, zvemukati manejimendi, uye Webhu CMS masystem. Izvi zvinosanganisira Marketo, Adobe, Oracle, HubSpot, WordPress uye Drupal, kukurumidza kushambadzira kwepasirese pachiyero, kuwedzera ROI yekushambadzira-kuyedza kwepasirese kuyedza, uye kuwedzera zvakanyanya kudikanwa kwekugadzirwa uye mari.
Cloudwords Makiyi Makuru
Real-nguva Analytics uye Mishumo: Teedzera mashandisirwo, ongorora mashandiro enzira, uye chiyero chemhando uye ROI pasirese nepasirese nhanho munguva chaiyo.
Global Campaign Management: Zvakabatana ronga uye uite epasirese, enharaunda, uye emunharaunda makwikwi zvakanyanya zvine hungwaru uye nekukurumidza pamadhipatimendi, zvikamu zvebhizinesi, uye geographies. Gadzira mapurojekiti ekushandura uye uteedzere kufambira mberi nemadhodhi ane simba. Unify zvikwata zvakapararira nekuisa pakati kutaurirana uye kubatana, uye gamuchira zvoga zviyeuchidzo uye zviziviso.
Cloudwords OneReview: Iyo indasitiri inotungamira yekubatana mu-mamiriro ekuongorora uye yekugadzirisa chishandiso, OneReview's yepamusoro tekinoroji kugona inoita iyo iri nyore nzira yekudzokorora uye kugadzirisa yakashandurwa zvemukati.
Cloudwords One TM: Dhatabhesi-rakagamuchirwa Dudziro Yekuchengetedza dhatabhesi inochengetera mazwi uye chirevo chekambani zvakatoshandurwa uye anozvichengeta zvakagadziriswa mukati me database. Vashanduri vako vanokwanisa kuwana OneTM yekambani yako, kuchengetedza nguva nemari pamitengo yekushandura, uye kuchengetedza mameseji emagetsi anoenderana pamisika yakawanda uye mitauro yakawanda.
Cloudwords Vatengi Kubudirira Nhau
Cloudwords mubatanidzwa wehukama munzvimbo yekushandisirwa makambani eFortune 500 uye Global 2000 pasirese, kusanganisira CA Technologies, Palo Alto Networks, Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia, uye Blackboard.
Cloudwords inogadzirisa chishuwo chakakosha chechero mutengi anoita kushambadzira pasirese pasirese. Richard Harpham, CEO weCloudwords
Cloudwords Inoisa Marketo mukutonga kweayo Global Webhusaiti
Kushambadzira otomatiki chikuva Marketo muenzaniso wakanaka weCloudwords mutengi anounza mawebhusaiti enzvimbo kune vateereri vepasirese munzvimbo dzakanangwa. Chikwata cheMarketo chakakwanisa kumhanyisa nguva dzekushandurwa kwezvinhu zvemunyika saka nzvimbo dzayo dzepasirese dzakagadziridzwa panguva imwechete kana mukati memazuva eiyo saiti yeUS, maringe nemavhiki kana mwedzi gare gare. Verenga yakazara nyaya yekudzidza.
Palo Alto Networks Inosvika kune Vateereri Vepasi Pese nekukurumidza neCloudwords
Network uye Enterprise chengetedzo kambani Palo Alto Networks yanga isiri kududzira zvakapetwa zvakawandisa sezvazvinodiwa kuti zvienderane nezvinodiwa zvemudunhu nekuti vaive nehurongwa hwekushomeka hwaive hwakasimba, hunodhura uye hunotora nguva. Cloudwords inobvumira timu kuti igadzirise zvirinyore zvirongwa zvemunharaunda, uye iyo otomatiki interface pakati peAdobe Experience Manager uye Cloudwords inomhanyisa dudziro yekushandura nguva, ichivagonesa kugadzira uye kuburitsa yakawanda yemuno mishandirapamwe, kazhinji kazhinji, kutyaira kudiwa uye mari pasirese. Verenga iyo yakazara nyaya yekudzidza.
Inzvimbo yepamusoro muSan Francisco, Cloudwords inotsigirwa neStorm Ventures uye gore komputa vanoona saMarc Benioff, muvambi we salesforce.com. Email Discover@cloudwords.com Kana kushanyira www.vanodemo.com kuti uwane rumwe ruzivo, uyejoinha hurukuro yepasirese paTwitter @CloudwordsInc uye pamusoro Facebook.
Tags: kupiswaBhodhiCA TechnologiesmakoredrupaleloquachaizvoFaira Kugovana MapuratifomuFitbitzvepasi rosewepasi rose zvemukati mukahaGlobal Kushambadziramushambadziro wekushambadzira wepasireseHachhubspotIron MountainlocalizationmarketoMcDonald raMwaripangatauraPalo Alto NetworksPatagoniaSiemensnzvimboshanduroWordPress